Wondershare MobileTrans User Guide - Blackberry ndabere ka Android
MobileTrans Guide: Blackberry ndabere ka Android
Nzọụkwụ 2. Na Primary Ohere, họrọ "Weghachi si Backups", ma họrọ "Blackberry" site nhọrọ nyere.
Nzọụkwụ 3. Jikọọ gị android ngwaọrụ gị na kọmputa na iji eriri cables na-eche maka MobileTrans na-aghọta na ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 4. Họrọ faịlụ ị ga-achọ nyefee si ọ bụla nke Blackberry ndabere faịlụ egosipụta na n'aka ekpe. Ọ bụrụ na i nwere ike ịhụ na nkwado ndabere faịlụ na ị chọrọ, ị nwere ike pịa "Tinye ndabere faịlụ" n'ihi ọzọ nhọrọ.
I nwekwara ike ikpebi ị ga-achọ ikpochapụ data na njedebe gị ngwaọrụ tupu edegharị. Ị pụrụ nanị ime nke a site ịlele ahụ "Clear data tupu oyiri" igbe.
Nzọụkwụ 5. Pịa "Malite Copy" iji malite usoro. Na-na ngwaọrụ gị ejikọrọ site dum usoro.
Ọzọ: iCloud ndabere ka iOS